I-10 Best Tablets Yokuthenga (Izindleko / Inzuzo)
Bruno Esteves 2018-10-03T22:32:38+00:00
Ufuna amaphilisi angcono ukuthenga?
Iphethwe ngokubuka njalo isikrini esincane lapho uvula i-intanethi kuwe smartphone noma ukubuka amanethiwekhi abo omphakathi noma ukudlala imidlalo yabo.
Ngakho lesi sihloko sikulungele wena.
Sizobonisa i-10 Amathebulethi Angabhekene nalunye uhlelo lwe-Android nge-Windows noma ngisho nezinhlelo zombili ukuze zisebenziseke zombili zomhlaba.
Ibhetri - 9.0
Bonisa - 9.6
Amakhamera - 6.8
Ukusebenza - 9.3
Isofthiwe - 9.1
Umklamo - 9.0
Enye yeziphilisi ezingcono kakhulu emakethe.
Sikhuluma ngakho Xiaomi Mi Pad 4, idivaysi efuna ngokuqinisekile ezandleni zakho.
Ukusebenza ku okungavamile, kucabanga ukuthi ineprosesa I-Snapdragon 660, ngokuqinisekile uzokwazi ukusekela zonke izinhlobo zemidlalo nezinhlelo zokusebenza.
Ithebulethi inezinguqulo ezintathu:
I-3 GB / 32 GB
I-4 GB / 64 GB
I-4 GB / 64 GB LTE
A ikhwalithi yokwakhiwaKuhle kakhulu, sikhuluma ngomzimba we-aluminium, engesiko eminye amaphilisi amaningi, okwenza lokhu kuvelele nakakhulu.
Kulabo abafuna ithebhulethi enamandla lokhu ngokungangabazeki kuyoba enye yezinto ezingcono kakhulu zokuthenga.
Especificações Xiaomi Mi Pad 4
Ubukhulu X x 200.2 120.3 7.9 mm
Isikrini I-IPS LCD
Usayizi weskrini Amasentimitha angu-8
Isixazululo sesikrini 1920 × 1200
Uhlelo Lokusebenza (Windows) N / A
Uhlelo Lokusebenza (i-Android) I-Android 8.1 (i-Oreo)
CPU I-Snapdragon 660 (i-Octa-core)
GPU I-Adreno 512
RAM I-3 GB / 4 GB
I-Memory Card Slot Yebo (microSD kuya ku-256GB)
Imemori yangaphakathi I-32 GB / 64 GB
Izimpahla zeHhovisi Ngaphambili: I-5 MP Emuva: I-13 MP
Ibhetri 6.000 mah
Amapayipi we-USB Uhlobo lwe-1
nezinye N / A
Amathebulethi Aphezulu Okuthenga
Bonisa - 9.1
Ibhetri - 8.1
Ikhamela - 6.3
Ukusebenza - 8.6
Isofthiwe - 9.0
Umklamo - 8.8
I-Teclast M20, idivayisi ozohlala ufuna ukuthwala nawe.
Inayo ukusebenza kuhle kakhulu uma kuqhathaniswa nezibhebhe eziningi ezisemakethe.
Iqukethe iphrosesa U-Helio X23 no-4 GB we-RAM okuyinto izofeza cishe zonke izinhlobo zezicelo noma imidlalo ngaphandle kobunzima obukhulu.
Akukhona lokho kuphela, kodwa nawe ungakwenza ngokushelela okuningile mishini.
Ithebulethi yakho inakho 64 GB okuyinto enganwetshwa ngekhadi le-microSD kuze kufike ku-128 GB.
Jula amakamelo amabili, enye ngemuva ngaphandle kwe-5 MP flash ebonakala ibe buthakathaka futhi enye phambi kwe-2 MP.
A ibhetri ekusetshenzisweni okujwayelekile kungadlulela ku-6 kumahora angu-7.
Uhlelo luyi-Android 8.0 (Oreo).
Especificações I-Teclast M20
Ubukhulu X x 241 168 7.4 mm
Usayizi weskrini Amasentimitha angu-10.1
Isixazululo sesikrini 2560 × 1200
Uhlelo Lokusebenza (i-Android) I-Android 8.0 (i-Oreo)
CPU I-Helio X23 (i-Deca-core)
I-Memory Card Slot Yebo (microSD kuya ku-128GB)
Imemori yangaphakathi 64 GB
Izimpahla zeHhovisi Ngaphambili: I-2 MP Emuva: I-5 MP
Ibhetri 6.600 mah
Amapayipi we-USB I-1 Micro-USB
Bonisa - 9.0
Ikhamela - 4.0
Ukusebenza - 8.5
Isofthiwe - 8.8
Umklamo - 8.0
Uma ufuna ithebhulethi ngokusekelwa Ikhadi le-SIM futhi nge GPS lokhu kungaba kuhle.
Yebo, lokhu Amasentimitha angu-10.1 inezinye izikhwepha njengendlela yokusebenza engeke ikudumaze uma usebenzisa olunye uhlelo lokusebenza noma umdlalo ngoba lithembele kuprosesa Helio X20 ye-nuclei eyishumi futhi I-4 GB ye-RAM ukusiza.
Okuthakazelisayo ukubonisa imishini 2560 × 1600, nalezi zixazululo kuzonikeza injabulo enkulu ukuthi ibe kudivayisi ebukele amavidiyo avela ku-Youtube noma ku-Netflix.
Isici esithakazelisayo kakhulu salesi sibhebhe kufanele sibe nayo izikhulumi ezimbili, omunye ngakwesokunxele nenye ngakwesokudla, ngakho uzogxila kakhulu kumavidiyo noma kumageyimu wakho.
I ALLDOCUBE M5 yiyona I-Android Oreo (8.0), hhayi amathebulethi amaningi afika nalesi simiso kodwa kunokuba ne-Android Nougat, okwenza kube ngcono nakakhulu ukuthenga lo mshini.
Inkumbulo iy 64 GB okungase kwandiswe ngekhadi le-microSD kuze kufike ku-128 GB.
Iza amakamelo amabili we-2 MP ngaphambi nangemuva kwe-5 MP.
Ithebulethi enhle ngentengo enkulu.
Especificações ALLDOCUBE M5
Ubukhulu X x 241.3 171.7 8.7 mm
Isixazululo sesikrini 2560 × 1600
CPU I-Helio X20 (i-Deca-core)
GPU I-Mali T880
I-Chuwi Hi9 Pro
Ibhetri - 8.4
Bonisa - 9.2
Amakhamera - 6.4
Isofthiwe - 8.6
Umklamo - 8.5
I-Chuwi Hi9 Pro, umfowabo omncane we-Hi9 Air.
Ngenxa yokuthi idivayisi inekhompyutha efanayo, ishintsha kancane ku-RAM nokugcina.
Ubukhulu bethebulethi Amasentimitha angu-8.4 kodwa unesinqumo 2560 × 1600.
Futhi cha, akupheli lapha ...
Ikhona inqubo efanayo ye-Hi9 Air, i Helio X20, kuyokwanela ukudlala imidlalo yakho oyintandokazi.
Ukwenza ukukhwabanisa okuningi kuzoba ne-3 GB ye-RAM
Isitoreji singu-32 GB kodwa uma singanele ngokwanele kungakhula ngekhadi le-microSD.
Amakhamera amabili, angemuva ne-8 MP ne-front ne-5 MP.
Ibhethri ye-handset yenye yezinzuzo ukwazi ukuthi yi-5.000 mAh ezosinika amahora ambalwa wokusebenzisa.
Lethebhulethi njengoba bethi "inakho konke kusayithi" futhi intengo enhle.
Especificações I-Chuwi Hi9 Pro
Ubukhulu X x 217.4 128.9 7.9 mm
Usayizi weskrini Amasentimitha angu-8.4
Imemori yangaphakathi 32 GB
Izimpahla zeHhovisi Ngaphambili: I-5 MP Emuva: I-8 MP
Ibhetri 5.000 mah
I-Chuwi Hi9 Air
Bonisa - 8.6
Amakhamera - 7.1
Umklamo - 8.7
Idivayisi enamandla ngokwanele yokusekela noma yikuphi umdlalo noma uhlelo lokusebenza.
Leli foni linamasentimitha angu-10.1 2560 × 1600futhi ngokucubungula Izinhlamvu ze-10 nokuningi I-4 GB ye-RAM,
konke lokhu ukuze ukwazi ukusebenzisa izinhlelo zakho eziyizintandokazi ngokuphumelelayo futhi uphephe intanethi ngaphandle kokukhathazeka.
Isikhala sika I-64 GB yesikhala futhi uma akwanele ungakhetha ukubeka imemori khadi phezulu 128 GB ukugcina yonke idatha.
Ithebhulethi inesimo esithile esisekela I-SIM yesibili ukuze sibe ne-intanethi ngaphandle kwendlu ngaphandle kokuthi sibe yi-Wi-Fi, okwenza kube inzuzo enhle kulolu lwazi.
Umklamo wedivaysi okukhangayo njengokwakhiwa komuntu siqu nakho kuhle.
Esinye isici esithakazelisayo yilokho GPS, uma ufuna ukusebenzisa i-tablet yakho esikhundleni se-smartphone yakho.
Kuyinto ithebhulethi enamandla futhi enomusa kakhulu.
Especificações I-Chuwi Hi9 Air
Ubukhulu X x 241.7 172 7.9 mm
Ibhetri 8.000 mah
Amathebhulethi angcono kakhulu okuthenga
Ibhetri - 8.5
Isofthiwe - 8.7
Ithebulethi enhle kakhulu kokubili multimedia nemidlalo.
Ngokubuka izici zedivayisi, a Izinhlamvu zeprosesa ze-6 inamandla kakhulu futhi ngosizo I-4 GB ye-RAM okuyinto ezovumela ukunikeza ukusetshenziswa kwanoma yisiphi isicelo kanye nomdlalo.
Kodwa ungacabangi ukuthi lokho kuzosebenza kuphela lokhu, ithebulethi iphelele futhi ukuthi ingalahlekelwa amavidiyo wakamuva ku-Youtube , enesinqumo 2560 × 1600, ikhwalithi "enamandla" kumishini ebiza izindleko.
Amandla 64 GB Uma udinga inkumbulo engaphezulu ungayengeza ikhadi le-microSD.
Ubukhulu bedivayisi buyi Amasentimitha angu-8.4 okuyinto ezokwenza kube lula ukuphatha.
Ibhethri liyi 5.400 mah, ibhethri iyamukeleka kakhulu kwi-hardware ebucayi.
Ikhwalithi yokwakha ihle kakhulu ngenani lombuzo, onesigqi esinamandla.
Ukuklama kungenye ukubukeka okuqinile Ukuba yensimbi kusiza kancane ubuhle.
Izimangalo azimi lapha, zisenayo inzwa yeminwe phambili, Uhlobo lwe-USB, nezindawo ezithakazelisayo.
Ithebulethi ye-Android yokunethezeka nokuncane kakhulu.
Especificações Teclast T8
Ubukhulu X x 219.5 127.9 7.8 mm
Uhlelo Lokusebenza (i-Android) I-Android 7.0 (Nougat)
CPU I-MTK8176 (Hexa-core)
GPU I-PowerVR GX6250
Izimpahla zeHhovisi Ngaphambili: I-13 MP Emuva: I-8 MP
Ibhetri 5.400 mah
Ibhetri - 8.8
Bonisa - 8.7
Amakhamera - 6.0
Ithebulethi eneklasi kanye ne intengo ephansi.
Lo mshini une ukusebenza kahle kanye a isikrini esihle.
Kuyinto a inani elingeziwe kulabo abahlose ukuba nemishini emihle yokukhipha endlini, babe ku-cafe futhi basebenzise nsuku zonke.
Idivayisi ingase ifaneleke amanethiwekhi omphakathi esikhundleni sokuba esesikrinini esincane.
Ithebhulethi engasetshenziswa futhi ukudlala kusukela kunayo ukusebenza kuhle kakhulu.
Inkumbulo yakhe ikhona 64 GB, enwetshiwe ngekhadi le-microSD lokugcina okungaphezulu kwe-128 GB.
Imiklamo isivele isisindo sokubonakala ngobukhulu Amasentimitha angu-10.
Usenayo amakamelo amabili, phambili nangemuva kanye a inzwa ye-biometri ukuvikela idivayisi yakho.
Ithebulethi enhle okufanele icatshangelwe.
Especificações Teclast T10
Ubukhulu X x 239 166.9 7.6 mm
CPU I-MTK8176 (i-Quad-core)
Ibhetri 8.100 mah
nezinye I-1 Micro-HDMI
Ibhetri - 7.3
Amakhamera - 4.5
Ukusebenza - 8.4
Ufuna ukunikeza ithebhulethi ye-Android nge ukusebenza kahle?
Lethebhulethi ingaba ekahle kunoma ubani ofuna ukuba nomshini osekelayo Iningi imidlalo kanye nezinhlelo zokusebenza ku-Google Play Isitolo.
Futhi yebo, ikwazi ukugijima kahle, izinhlelo eziningi namageyimu, ukwazi ukuthi inayo iphrosesa eyanele ukusekela futhi nge I-4 GB RAM, okungelula kakhulu ukuthola lezi zinsuku, amaphilisi anale RAM.
Ukugcinwa kwalo mshini kuyinto 64 GB futhi inokusekela imemori khadi kuze kufike ku-128 GB.
Usayizi ubu Amasentimitha angu-8.4, usayizi ophelele gaming.
It has a resolution of 2560 × 1600okuyinto ekugcineni iletha ubuhle obengeziwe esibukweni.
Iza amakamelo amabili, enye ngemuva ngemuva kwe-5 MP futhi enye phambi kwe-2 MP.
Uhlelo luyi-Android 7.0 (Nougat).
Idivayisi enhle kulabo abafuna ukuba nethebulethi kumnandi.
Especificações Chuwi Hi9
Ubukhulu X x 216.5 129.5 8.8 mm
CPU I-MTK8173 (i-Quad-core)
Ibhetri 4.500 mah
Ibhetri - 7.7
Amakhamera - 6.7
Isofthiwe - 8.5
Ithebhulethi okufanele icatshangelwe.
Ngoba le mishini ingakwazi ukusebenzaKuhle kakhulu ku- intengo othintekayo.
Ngakho ungadlala imidlalo yakho oyithandayo kule divayisi ngaphandle kwanoma iyiphi inkinga.
Kuzoqhubeka 32 GB ukuze ulondoloze izithombe zakho, umculo, namavidiyo, noma ngisho nezinhlelo zokusebenza ozokufaka kule divayisi.
Uma akwanele ungakwazi ukunweba imemori kanye ne-128 GB.
Idivayisi yakho iza nayo I-3 GB ye-RAM okuyinto eyaneleyo ukukwazi ukusekela imisebenzi eminingi ngokuphumelelayo.
Isixazululo sekrini HD Full futhi inekhwalithi enhle kakhulu, ngosayizi wesibuko Amasentimitha angu-7,9.
Jula amakamelo amabili ngemuva 8 ILUNGU LEPHALAMENDE futhi phambili 5 ILUNGU LEPHALAMENDE.
Ibhethri yalethebhulethi ngokusetshenziswa okulinganiselwe ingase isekele okungenani i-4h30m.
A ikhwalithi yokwakhiwa Kuyinto enhle kakhulu yokwensimbi.
Ingabe uzonikeza lethebulethi kumuntu oseduze nawe?
Especificações I-Teclast M89
Ubukhulu X x 199 136 7.4 mm
Usayizi weskrini Amasentimitha angu-7.9
Isixazululo sesikrini 2046 × 1536
Ibhetri 4.840 mah
I-Lenovo Tab3 8 Plus
Bonisa - 8.3
Amakhamera - 5.5
Ukusebenza - 8.2
Umklamo - 7.9
Ithebhulethi elula nge ukusebenza kahle.
Lokhu Amasentimitha angu-8 inokusebenza okuhle futhi iza nesistimu ye-Android,
kulabo abafuni iWindows, lokhu kuyisici esihle kakhulu semishini.
Ngokucubungula I-Snapdragon 625 ne-3 GB RAM uzokwazi ukusebenzisa ngokuphelele ukusetshenziswa kwanoma yiluphi uhlelo lokusebenza futhi ugijima kakhulu emidlalweni.
Kusenayo i-16 GB yememori, ingu-yebo encane kodwa ungandisa inkumbulo kuze kufike ku-64 GB ngekhadi le-microSD.
Inamakamelo amabili, elinye labalandela linge 5 ILUNGU LEPHALAMENDE e 8 ILUNGU LEPHALAMENDE phambili, ungasebenzisa ngokunenzuzo ukuthatha i-selfies ezithakazelisayo kule tablet.
Idizayini yakhe impela elula.
Ibhethri ingadla amahora we-6 ngokusetshenziswa okulinganiselwe.
Kulabo abangafuni sebenzisa okuningi lethebhulethi ingaba yinto enhle!
Especificações I-Lenovo Tab3 8 Plus
Ubukhulu X x 210 125 8.9 mm
Uhlelo Lokusebenza (i-Android) I-Android 6.0 (i-Marshmallow)
CPU I-Snapdragon 625 (i-Octa-core)
GPU I-Adreno 506
I-Memory Card Slot Yebo (microSD kuya ku-64GB)
Imemori yangaphakathi 16 GB
Izimpahla zeHhovisi Ngaphambili: I-8 MP Emuva: I-5 MP
Ibhetri 4.250 mah
Xhumana nathi | I-10 Best Tablets Yokuthenga
Uma wenza ukuthenga ngokubambisana kwethu ne-Banggood ne-GearBest, khetha ukhetho lokuthumela sicela ukhethe Umzila oPhambili ukugwema izindleko zamasiko.
Sikhetha amaphilisi angcono kakhulu ekuzuzeni izindleko kanye nekhwalithi ukuze bakwazi ukwaneliseka.
Lolu hlu lufakazela ukuthi akudingeki sisebenzise okuningi ukuze sibe nemikhiqizo yekhwalithi.
Ingabe ukhethe ithebulethi yakho okwamanje?
 10 Best Drones Ukuthenga (Izindleko / Inzuzo)
 I-15 Best Smartphones Ukuthenga (Izindleko / ...
 I-10 Best Vacuum Cleaners I-Robot Yokuthenga ...
 I-10 Best Action Cameras Yokuthenga
 10 best imikhiqizo Xiaomi ukuthenga
 10 Best Smartwatches Ukuthenga (Izindleko ...
 Amasayithi amahle kakhulu we-7 ukuze abuke ama-movie nochungechunge (amahhala)
 Funda ukuthi ungalayisha kanjani amavidiyo we-Youtube (10 APPS / SITES)
I-CHUWI i-Hi9 64GB, ukubheja okusha kwe-CHUWI
I-GitXP GitUp Isenzo Sokuhlola Git2 Pro
Thenga Online: 10 Best iPhone Apps ...
Ukubuyekezwa kwe-Tablet ye-Teclast X80 Pro
Ungathandi Yabelana nezwe!
I-copyright 2018 Khetha Okuphephile | Wonke Amalungelo Agodliwe | Mayelana nathi | Xhumana nathi | Inqubomgomo Yemfihlo